B.E(civil) ဘွဲ့တောင်ရထားပေးမယ့် လမ်းဘေးမှာ အရက်မူးရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတဲ့ ဆရာမင်းစည်သူ – ရှအေလငျး
B.E(civil) ဘွဲ့တောင်ရထားပေးမယ့် လမ်းဘေးမှာ အရက်မူးရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတဲ့ ဆရာမင်းစည်သူ
စာဖတ်ပရိသတ်များခင်ဗျာ… သေရည်သေရက်ဟာ တန်ဆေးလွန်ဘေးဖြစ်တဲ့အတွက် အတန်အသင့် အသုံးပြုပါက ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ပြီး…
အလွန်အကျွံသောက်မိရင်တော့ အသက်ပါသေတဲ့အထိ အန္တရာယ်များလှပါတယ်…. နေ့စဉ်အရက်ကြောင့် သေဆုံးနေတဲ့လူပေါင်းများစွာ ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိနေပါတယ်….
ယခုတစ်ခါမှာတော့ အတတ်ပညာတွေများစွာတတ်ထားပေမယ့်.. အသိပညာအနည်းငယ်အားနည်းမှုကြောင့် အရက်သမားဘဝရောက်သွားတဲ့ ကျူးရှင်ဆရာ မင်းစည်သူပဲဖြစ်ပါတယ်….
ရန်ကုန်မှာ ကျူးရှင်သင်ခဲ့ပေမယ့်.. လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အရက်ရဲ့ကျေးကျွန်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး… မန္တလေးရဲ့ လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ တောင်းစားနေရတဲ့ ဘဝကိုရောက်နေခဲ့ပါတယ်…
ယခုရုပ်သံလေးကို ဆရာနဲ့သိတဲ့သူတွေ မြင်တွေ့နိုင်အောင် ရှယ် လုပ်ပေးကြဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နော်….
မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက် ပြန်လည်ခေါ်လိုပါက ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး ( ကိုဝမ်း ဖုန်း ၀၉၇၆၅၇၆၅၁၇၉ (မန္တလေးမြို့) ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်…..
စိတ်ကစားတတ်ပြီးအရာရာကို စမ်းသပ်တတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် သားတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုရင်… အရက်ရဲ့ဆိုးကျိုးကို ပြောပြထားပြီး.. အချိန်မလွန်ခင်ကတည်းက ဆုံးမပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်….
Writer – SHN (နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ)
Video Source : ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး
စာဖတျပရိသတျမြားခငျဗြာ… သရေညျသရေကျဟာ တနျဆေးလှနျဘေးဖွဈတဲ့အတှကျ အတနျအသငျ့ အသုံးပွုပါက ကနျြးမာရေးအတှကျ အထောကျအကူပေးနိုငျပွီး…
အလှနျအကြှံသောကျမိရငျတော့ အသကျပါသတေဲ့အထိ အန်တရာယျမြားလှပါတယျ…. နစေ့ဉျအရကျကွောငျ့ သဆေုံးနတေဲ့လူပေါငျးမြားစှာ ကမ်ဘာအနှံ့မှာရှိနပေါတယျ….
ယခုတဈခါမှာတော့ အတတျပညာတှမြေားစှာတတျထားပမေယျ့.. အသိပညာအနညျးငယျအားနညျးမှုကွောငျ့ အရကျသမားဘဝရောကျသှားတဲ့ ကြူးရှငျဆရာ မငျးစညျသူပဲဖွဈပါတယျ….
ရနျကုနျမှာ ကြူးရှငျသငျခဲ့ပမေယျ့.. လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အရကျရဲ့ကြေးကြှနျဖွဈခဲ့ရပွီး… မန်တလေးရဲ့ လမျးဘေးတဈနရောမှာ တောငျးစားနရေတဲ့ ဘဝကိုရောကျနခေဲ့ပါတယျ…
ယခုရုပျသံလေးကို ဆရာနဲ့သိတဲ့သူတှေ မွငျတှနေို့ငျအောငျ ရှယျ လုပျပေးကွဖို့လညျး မတ်ေတာရပျခံပါတယျနျော….
မိသားစုဝငျတဈယောကျယောကျ ပွနျလညျချေါလိုပါက ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး ( ကိုဝမျး ဖုနျး ၀၉၇၆၅၇၆၅၁၇၉ (မန်တလေးမွို့) ကိုဆကျသှယျနိုငျပါတယျ…..
စိတျကစားတတျပွီးအရာရာကို စမျးသပျတတျတဲ့ ဆယျကြျောသကျ သားတဈယောကျပိုငျဆိုငျထားတယျဆိုရငျ… အရကျရဲ့ဆိုးကြိုးကို ပွောပွထားပွီး.. အခြိနျမလှနျခငျကတညျးက ဆုံးမပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော….
Writer – SHN (နစေ့ဉျသတငျးနှငျ့သုတရသအဖွာဖွာ)
Video Source : ONE TO ONE ကလေးလူနာကူညီရေး
ရေအောက် နစ်မြုပ်သွားတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းက အင်ဒိုင်း ကျေးရွာလေး ရုတ်တရက် ပြန်ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်ရပ်
လူဦးရေ နည်းနေသဖြင့် တက္ကသိုလ်တွင် မဖြစ်မနေ ရည်းစားထားရမည့် ဘာသာရပ်...
စီးပွားရေးခက်ခဲနေပါသော်လည်း ရိုးဂုဏ်ကိုအပျက်မခံခဲ့တဲ့ Taxi မောင်းသမားကြီးရဲ့...